ကိုမိုဒိုနဂါး - ဝီကီပီးဒီးယား
(အင်္ဂလိပ်: Komodo Dragon)
Pliocene–Holocene, 3.8–0 Ma
ကိုမိုဒို အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ။
ကိုမိုဒိုနဂါးများကို တွေ့ရှိရသော ဒေသများ
ကိုမိုဒိုနဂါး(အင်္ဂလိပ်: Komodo dragon) မှာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့် အလေးလံဆုံး ဧရာမ ဖွတ်ကြီးဖြစ်ပြီးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ကိုမိုဒို၊ ရင်ကာ၊ ဖလောရက်စ် နှင့် ဂီလီမိုတန်း နှင့် ပါဒါကျွန်းများပေါ်တွင် နေထိုင်ကျက်စားသော အဆိပ် အလွန်ပြင်းထန်သည့် ဖွတ်ကြီးတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ဖွတ်မျိုးရင်း Varanidae တွင်ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ သတ္တဗေဒအမည်မှာ Varanus kamodoensis ဖြစ်သည်။ သက်ရှိဒိုင်နိုဆောဟုတင်စားနိုင်သော ကိုမိုဒိုနဂါးများကို ကိုမိုဒိုကျွန်းပေါ်၌ အများဆုံးတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အလျားမှာ ၃ မီတာ(၁၀ ပေ)အထိကြီးထွားပြီး ပျမ်းမျှအလျားမှာ ၂.၆ မီတာ(ရှစ်ပေ)ခန့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အလေးချိန်မှာ ပေါင် ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။
ကိုမိုဒါနဂါးအမ၏ ခန္ဓာကိုယ်အလျားမှာ များသောအားဖြင့် ရှစ်ပေခန့်ရှိပြီး အလေးချိန်မှာ ပေါင် ၁၅၀ ခန့်ရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ ဧရာမခန္ဓာကိုယ် အရွယ်အစားမှာ ၎င်းတို့နေထိုင်ကျက်စားသော ကျွန်းများပေါ်၌ အခြားအသားစား သတ္တဝါကြီးများမရှိသောကြောင့်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ ဇီဝကမ္မဖြစ်ပျက်နှုန်း နှေးကွေးသောကြောင့်လည်းကောင်း ဤသို့ အလွန်ကြီးမားနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုမိုဒိုကျွန်းတွင်တွေ့ရှိရသော ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ဖွတ်မျိုးနွယ်ဝင် ကိုမိုဒိုနဂါး တစ်ကောင်
ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား အလွန်ကြီးမားမှုကြောင့် အဆိုပါဖွတ်ကြီးများသည် ၎င်းတို့ နေထိုင်ကျက်စားသော ကျွန်း၏ ဂေဟစနစ်ကို အဓိကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးထားသဖြင့် "ကျွန်းဘုရင်" သတ္တဝါအဖြစ် တင်စားကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတွင် သန်မာသောခြေထောက်၊ ချွန်ထက်သောသွား နှင့် ခြေသည်းများ၊ အရှိန်ပြင်းထန်စွာ တအားလွှဲရိုက်နိုင်သော အမြီးတို့ပါရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့တွင် သန်မာသောမေးရိုးများ ပါရှိပြီး ၎င်းမေးရိုးဖြင့် သားကောင်၏အရိုးအဆစ်များကို ဖျစ်ညှစ်ချိုးခြေပြီး အသားတုံးကြီးများကို ပလုပ်ပလောင်း မျိုချနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပါးစပ်အတွင်းမှ တဖျပ်ဖျပ် ထုတ်ချည်သွင်းချည်ပြုနေသော အဝါရောင်ရှည်လျားသည့် လျှာနှစ်ခွမှာ ပါးစပ်အတွင်းမှ တစ်ပေခွဲကျော်အထိ ထိုးထွက်နေပြီး အရသာနှင့် အနံ့ခံအင်္ဂါအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ အကယ်၍ လေကြောင်းသင့်ပါက ကိုမိုဒိုနဂါး၏ ထက်မြက်စူးရှသော အနံ့ခံအာရုံသည် ရှစ်ကီလိုမီတာခွဲ (ငါးမိုင်) ရှိ တိရစ္ဆာန် အသေကောင်၏ အပုပ်နံ့ကိုပင် အနံခံသိရှိနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး၏ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားမှာ အလွန်ကြီးမားလေးလံသောငြားလည်း ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မလိုက်ဖက်အောင် လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးသည် ကြီးမားလေးလံသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အမြီးကို မြေပြင်ပေါ်မှ ကြွအောင် မြှောက်ထားပြီး တစ်နာရီလျှင် ၂၅ ကီလိုမီတာ (၁၅ မိုင်) ကျော်နှုန်းဖြင့် တစ်ဟုန်ထိုး ပြေးလွှားနိုင်သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး၏ သန်မာသော ခြေထောက်များမှာ မက်စောက်သော တောင်ကုန်းကမူလေးများပေါ်သို့ တွက်တက်နိုင်ပြီး သုံးပေကျယ်သော မြေတွင်းကို တစ်နာရီမပြည့်ခင် ခြေဖြင့် ယက်၍ တူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးသည် အခြားဖွတ်မျိုးနွယ်များကဲ့သို့ပင် ရေကူးအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ၎င်းသည် ရေထဲတွင် ရေကူးသောအခါ ခြေလေးချောင်းကို ခန္ဓာကိုယ်နံဘေးတွင် ကပ်ထားပြီး အင်အားကြီးမားသော အမြီးဖြင့် ထိန်း၍ ရှေ့သို့ကူးခပ်သွားသည်။ ကိုမိုဒိုအထီးများသည် ရံဖန်ရံခါ ကျွန်းတစ်ကျွန်းမှ ဝေးလံသော အခြားကျွန်းတစ်ကျွန်းဆီသို့ ခရီးရှည် ရေကူးသွားတတ်သည်။
ကိုမိုဒို၏ အမြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်၏ နှစ်ဆရှည်လျားပြီး အလွန်အားသန်သည်။ ၎င်းသည် အမြီးကိုကွေးထားကာ သားကောင်အား အရှိန်ပြင်းထန်စွာ တအားလွှဲရိုက်ပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ လှဲချတတ်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ သွားများမှာ လွှသွားသဏ္ဌာန် ချွန်ထက်နေပြီး အသားစားငါးမန်းကြီး၏ သွားများနှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းတို့တွင် ချွန်ထက်သောသွား ၆၁ ချောင်းခန့် ပါရှိပြီး ကျိုးသွားသောသွားများနေရာတွင် သွားအစားပြန်ပေါက်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ သွားများပေါက်နေပုံမှာ သားကောင်၏ အသားတစ်များကို ကိုက်ဖြတ်ရန် အကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး၏ သွားရည်ထဲတွင် ဘက်တီးရီးယားပိုး အမျိုးအစား ၅၂ မျိုးခန့် ပါရှိသောကြောင့် အလွန်အမင်း အဆိပ်ပြင်းသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ကိုမိုဒိုနဂါး၏ အကိုက်ခံရသော ကျွဲ၊ သမင် သို့မဟုတ် တောဝတ်တို့မှာ ၇၂ နာရီထက်ပို၍ အသက်ရှင်နိုင်ခြင်းမရှိချေ။ ကိုမိုဒိုနဂါးများ၏ သဘာဝနေထိုင်ကျက်စားရာ နေရာဒေသများမှာ ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး မီးတောင်ပေါများသည့် ကျွန်းများပေါ်တွင် နက်ရှိုင်းမတ်စောက်သော တောင်စောင်းများအကြားဖြစ်သည်။
ထိုအရပ်ဒေသတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး ရေအနည်ငယ်မျှသာ ရရှိနိုင်သည်။ ကိုမိုဒိုကျွန်းပေါ်ရှိ ပျမ်းမျှနှစ်စဉ်အပူချိန်မှာ ၈၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးများကို ခြောက်သွေ့သော သစ်တောများအတွင်း၌ အကောင်ရေအမြောက်အမြားတွေ့ရသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လေယာဉ်ပျက်ကျသွားသော လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးသည် ကိုမိုဒိုကျွန်းပေါ်သို့ ရေကူးပြီးအမှတ်မထင်ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကိုမိုဒိုနဂါးများအား ပထမဦးဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးနောက် တစ်ဆင့် ပြန်လည် ဖောက်သည်ချခဲ့ရာ အပြင်လူများအနေဖြင့် ကိုမိုဒိုနဂါးများအကြောင်း စတင်သိရှိခဲ့ကြသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် မျိုးပွားရာသီအတွင်းမှတစ်ပါး ကျန်အချိန်များတွင် အများသောအားဖြင့် တစ်ကောင်တည်းသာ အထီးကျန်နေလေ့ရှိသော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ကိုမိုဒိုအထီးများသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်နက်နယ်မြေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်လေ့ရှိပြီး တစ်နေ့လျှင် ၂ ကီလိုမီတာ ( ၁ မိုင်) ကျော်အထိ ကင်းလှည့်လေ့ရှိသည်။ ပိုင်နက်နယ်မြေ အကျယ်အဝန်းမှာ ကိုမိုဒိုနဂါး၏ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် အစာရှာဖွေစားသောက်သောအခါ ပိုင်နက်ကို ကျော်လွန်၍ အစာရှာဖွေတတ်ကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးအထီးများသည် အခြားကိုမိုဒိုနဂါး အထီးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ သားကောင်ကို အမဲလိုက် ဖမ်းဆီးနိုင်သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် အစားအစာအတွက် သားကောင်ကို အမဲလိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေစဉ်အတောအတွင်း အခြားကိုမိုဒိုနဂါးများကို ၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေအား ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုထားသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးမှာ အသားစားသတ္တဝါဖြစ်ပြီး ဇာတ်တူသားစားသော သတ္တဝါလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အာသာဆန္ဒကြီးမားပြီး အစားအစာကို အငမ်းမရ စားသောက်တတ်သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးသည် များသောအားဖြင့် တိရစ္ဆာန်အသေကောင်များကိုသာ စားလေ့ရှိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ၊ ငှက်များ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ သမင်ပေါက်လေးများ၊ တောဝက်နီးပါးကြီးမားသော သားကောင်များ၊ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွဲကြီးများကိုပင် အမဲလိုက်ဖမ်းဆီးစားသောက်တတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရွယ်ရောက်ဧရာမကျွဲကြီးကိုပင် မြေပေါ်သို့ ဗုန်းဗုန်းလဲအောင် အမြီးဖြင့် အရှိန်ပြင်းထန်စွာ လွှဲရိုက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် နိုင်လိုမင်းထက်ပြုနိုင်သော ကိုမိုဒိုသားပေါက်ကလေးများ၊ လူသားကလေးငယ်များနှင့် ဒဏ်ရာရထားသောလူများအပါအဝင် မည်သည့် သတ္တဝါကိုမဆို စားသောက်သော ဥဿုံအစုံစားသတ္တဝါ ဖြစ်သည်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးသူတစ်ဦးက ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၁၀၀ ခန့်ရှိသော ကိုမိုဒိုနဂါးသည် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ပေါင် ၉၀ ခန့်ရှိသော တောဝက်တစ်ကောင်ကို မိနစ် ၂၀ အတွင်း တက်တက်ပြောင်အောင် စားသောက်ပစ်ကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ မိကျောင်းကဲ့သို့ အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ကုန်းမိကျောင်းဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးကို အင်ဒိုနီးရှားဘာသာဖြင့် 'ဘွာယာဒါရတ်' ဟုခေါ်သည်။ 'ဘွာယာ'မှာ အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားဖြင့် မိကျောင်းဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ရပြီး 'ဒါရတ်' မှာ ကုန်းမြေဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အရွယ်ရောက် ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ကြီးများမှာ ကိုးရိုးကားရားနှင့် လှုပ်ရှားမှု့နှေးကွေးသော်လည်း အခွင့်အရေးပေါ်လာပါက သားကောင်ကို အလျင်အမြန် ဖမ်းဆီးတတ်သည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး အစာရှာဖွေသောအခါ ၎င်း၏ လျှာနှစ်ခွကို ပါးစပ်အတွင်းမှ တဖျပ်ဖျပ် ထုတ်ချည်သွင်းချည် ပြုလုပ်ပြီး မြေကြီးပေါ်မှ သားကောင်တိရစ္ဆာန်၏ အနံ့ကို ၎င်း၏ ပါးစပ်ပေါက်အတွင်းရှိ နံ့နှင့်အရသာခံ အာရုံအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းထဲသို့ ထိုးသွင်းပြီး အနံ့ခံ ရှာဖွေလေ့ရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် သားကောင်ကို အမဲလိုက်ဖမ်းဆီးရာတွင် အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အိပ်ပျော်နေသော တောဝက် သို့မဟုတ် သမင်အား တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ နောက်ခြေထောက်အား ချွန်ထက်သော သွားဖြင့် အမိအရ မလွတ်တမ်း ကိုက်ခဲကာ ဒဏ်ရာရအောင် ပြုလုပ်တတ်ကြသည်။
ထို့နောက် သားကောင် သွေးထွက်လွန်ပြီး သေဆုံးသွားသည်အထိ စောင့်ဆိုင်းနေတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားသော သားကောင် အသက်မသေခင်မှာပင် သားကောင်အား အရှင်လတ်လတ် တစ်စစီကိုက်ဖြဲပြီး စားသောက်တတ်သည်။ ကိုမိုဒိနဂါးများသည် သားကောင်ကို တစ်ထိုင်တည်းဖြင့် ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော်ခန့်ကို လောဘတကြီး စားသောက်တတ်သည်။ ၎င်းတို့သည် စားသောက်ထားသော အစားအစာများ အစာကြေစေရန်အတွက် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ခန့် အစာခြေရသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် တစ်လ သို့မဟုတ် တစ်လကျော်ခန့် နောက်ထပ်မစားဘဲ နေတတ်သည်။
ကိုမိုဒိနဂါး၏ သန်မာတောင့်တင်းသော လည်ပင်းကြွက်သားများနှင့် လွှသွားသဏ္ဌာန် ချွန်ထက်သော သွားများက ကိုမိုဒိုနဂါး၏ ကြောက်မက်ဖွယ်သေစေနိုင်သော လက်နက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ မေးရိုးများမှာ မိကျောင်းနှင့် နှိုင်းစာပါက ၎င်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနှင့် မမျှအောင် အလွန်သန်မာလှသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် များသောအားဖြင့် တစ်ကောင်းတည်း အထီးကျန်သီးသန့်နေထိုင်ကျက်စားလေ့ ရှိသော်လည်း တိရစ္ဆာန်အသေကောင်၏ အသားကို စားသောက်ရန်အတွက်သာ အခြားအကောင်များနှင့်အတူ တစုတစည်းစုဝေးပြီး အလုအယက် ဝိုင်းအုံစာသောက်တတ်ကြသည်။ ထိုသို့ အလုအယက်စာသောက်ကြရင်း တိရစ္ဆာန်အသေကောင်၏ အကြီးမားဆုံးအသားတစ်ကို စာသောက်နိုင်ရန်အတွက် စားမာန်ခုတ်ပြီး ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် တိုက်ခိုင်သတ်ပုတ်လေ့ရှိကြသည်။
ဤသို့ ကိုမိုဒိုနဂါးကြီးများ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် ဒေါသတကြီး တိုက်ခိုက်သတ်ပုတ်နေကြစဉ် ၎င်းတို့၏ အလယ်ကြား ချောင်ပိတ်မိသော ကိုမိုဒိုအကောင်ပေါက်ကလေးများမှာ အကောင်ကြီးများ၏ သတ်ဖြတ်စားသောက်ခြင်းခံရသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဤဇာတ်တူသားချင်း စားသောက်သည့်ဓလေ့ကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင် ၁၂၀ ခန့် သေကျေပျက်စီးခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်အသေကောင်အား ဝိုင်းဝန်းလုယက်စားသောက်သည့်နေရာတွင် ကိုမိုဒိုနဂါးအထီးနှင့် အမတို့ ဆုံးစည်းမိကြသောကြောင့် မိတ်လိုက် မျိုးပွားတတ်ကြသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးအထီးသည် ၎င်း၏ နှာရောင်နှုတ်သီးကို အမ၏ခန္ဓာကိုယ်အားဖိပြီး အမ၏တုံန့်ပြန်မှုကို သိရှိရန်သွေးတိုးစမ်းသည့်အနေဖြင့် ၎င်း၏ရှည်လျာသော လျှာနှစ်ခွအား တဖျပ်ဖျပ် ထုတ်ချည်သွင်းချည်ဖြင့် စူးစမ်းတတ်သည်။ ထို့နောက် ၎င်းသည် အမ၏ နောက်ကျောအား ချွန်ထက်သော ခြေသည်းရှည်ကြီးဖြင့် ခွေးသွားစိပ်လည်သံကဲ့သို့ တဂျစ်ဂျစ်မြည်အောင် ကုတ်ခြစ်တတ်သည်။ အကယ်၍ ကိုမိုဒိုနဂါးအမက လက်မခံပါက အမသည် ခေါင်းထောင်ပြီး လည်ပင်းကိုဖောင်းကား၍ တရှူးရှူးမြည်သံကြီးဖြင့် ကျယ်လောင်စွာ နှာမှုတ်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့သည် မေလနှင့် ဩဂုတ်လအတောတွင်း၌ မိတ်လိုက်မျိုးပွားမှုစတင်ကြသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးအမသည် စက်တင်ဘာလတွင် ဥအုလေ့ရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးအမသည် အခြားသတ္တဝါတို့ စွန့်ပစ်ထားသော အသိုက်ထဲ၌ ဥပေါင်း ၃၀ ခန့် အုတတ်သည်။ ဥများကို ၇ လ မှ ၈ လအထိ ဝပ်ပြီး အင်းဆက်ပိုးကောင်များ လှိုင်လှိုင်ပေါသော ဧပြီလတွင် ကိုမိုဒိုနဂါးသားပေါက်လေးများ ဥမှ အကောင်ပေါက်လာသည်။ ဥမှပေါက်စအကောင်ငယ်လေးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်အရှည်မှာ ၅ လက်မ (၄၀ စင်တီမီတာ) ရှိပြီး အလေးချိန်မှာ ၃ အောင်စခွဲ (၁၀၀ ဂရမ်) ရှိသည်။ သားပေါက်ကလေးများမှာ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အညို၊ မီးခိုးရောင် စသည်ဖြင့် အရောင်အသွေးမျိုးစုံရှိပြီး အရေပြားပေါ်တွင် အစက်အပြောက်ကလေးများနှင့် အကွင်းများ ပါရှိသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး အကောင်ပေါက်လေးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်အရှည်မှာ ၁၈ လက်မမှ ၂၉ လက်မအထိ ရှိသည်။ အကောင်ပေါက်လေးများမှာ ဘေးအန္တရာယ်ကို မကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သားရဲတိရစ္ဆာန်များ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန် သစ်ပင်များပေါ်၌သာ ပုန်းအောင်းနေထိုင်ကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ပေါက်လေးများမှာ အလွန်လျင်မြန်သွက်လက်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ပြီး သစ်ပင်တက်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားဖွတ်သတ္တဝါများကဲ့သို့ပင် တိရစ္ဆာန်အသေကောင် အပြင် တောက်တဲ့၊ မြွေ၊ ငှက်ဥ၊ အင်းဆက်ပိုးကောင်များ၊ ငှက်ကလေးများ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်ကလေးများ နှင့် အခြားတွားသွားသတ္တဝါလေးများကိုလည်း စားသောက်သည့် အစုံစားသတ္တဝါဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အကောင်ပေါက်လေးများသည် တိရစ္ဆာန်အသေကောင်ကို စားသောက်ရန် သစ်ပင်ပေါ်မှ ဆင်းလာတတ်သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ပေါက်ကလေးများ၏ အစက်အပြောက်များပါသော အဝါရောင်အရေခွံမှာ နောက်ပိုင်းတွင် အစိမ်းရောင်သန်းသော အနက်ရောင်သို့ အရောင့်ရင့်သွားသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ပေါက်ကလေးများ အရွယ်ရောက်ရန် သုံး နှစ်မှ ငါးနှစ်အထိ အချိန်ကြာမြင့်ပြီး သက်တမ်းမှာ နှစ် ၂၀ မှ နှစ် ၅၀ အထိရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါး အမများသည် မေထုန်မဲ့မျိုးပွားနိုင်စွမ်းရှိသော အလွန်ရှားပါးသည့် ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများအနက် တစ်ကောင်အဖြစ်ပါဝင်သည်။ အကယ်၍ ကိုမိုဒိုနဂါးအမများသည် မိတ်လိုက်မျိုးပွားရန်အတွက် ကိုမိုဒိုနဂါးအထီးများ မရှိပါက အသက်ရှင်နိုင်သော ဥများကို မိမိဘာသာ ဥနိုင်စွမ်း ရှိသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ပေါက်ကလေးများသည် မြေပြင်ပေါ်ရှိ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ကြီး၏ မစင်ကို လျှာဖြင့်တို့ထိပြီး ခပ်စောစောက ဖြတ်သန်းသွားသော ကိုမိုဒိုနဂါး၏ အရွယ်အစားနှင့် ခရီးအကွာအဝေးကို မှန်းဆကြည့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ရှေ့သို့ခရီးဆက်သွားရန် သို့မဟုတ် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ရန် သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါး အကောင်ကြီးများ၏ လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းခံရသော အကောင်ပေါက်ကလေးများသည် သစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်၌ တစ်ခါတစ်ရံ ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်ခန့် ပုန်းအောင်းနေတတ်ပြီး မျောက်ကလေးများနှင့် ငှက်ကလေးများကို ဖမ်းဆီးစားသောက်ကြသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါး၏ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက်တို့မှာ ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်း ၅၀ သို့မဟုတ် ၆၀ ကာလက တဖြည်းဖြည်း ဆင့်ကဲတိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများက ပြသလျက်ရှိသည်။
အရွယ်ရောက် ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ကြီးများ၏ ခန္ဓာကိုယ်အရောင်မှာ မြေနီရောင်မှ ကျောက်သင်ပုန်းကျောက်ကဲ့သို့ မီးခိုးရောင်နှင့် အနက်ရောင်အထိ အရောင်အသွေး အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးမှာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်မည့် ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်လျက်ရှိသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့အတွက် အကြီးမားဆုံးဘေးအန္တရာယ်မှာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု၊ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အစားအစာ သားကောင် ရှားပါးလျော့နည်းလာမှုတို့ပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နိုင်သည့် ဖွတ်မျိုးစိတ်များအား ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ပိတ်ပင်တားဆီးသည့် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အရ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်နှင့် ၎င်း၏အရေခွံတို့အား စီးပွားဖြစ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။
ကိုမိုဒိုနဂါးများကို ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် အနောက်နိုင်ငံသား သိပ္ပံပညာရှင်များက ပထမဦးဆုံး စတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် ဧရာမအရွယ်အစားနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ် အဆင်းသဏ္ဌာန်တို့ကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ တိရစ္ဆာန်ရုံများတွင် ထင်ရှားကျော်ကြား ရေပန်းစားသော သတ္တဝါကြီးများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးများသည် အမြင်အာရုံကိုရော အနံအာရုံကိုပါ နှစ်မျိုးစလုံးအသုံးပြုပြီး အမဲလိုက်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ခါတစ်ရံ လူတိုကိုလည်း ရန်မူတိုက်ခိုက်တတ်သည်။
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက သက်ကြီးရွယ်အို ဆွစ်လူမျိုး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် တစ်ဦးမှာ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့၏ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် တောထဲ၌မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ဆုံးသွားရာ လုံးဝရှာမတွေ့တော့ချေ။ နောက်ပိုင်းတွင် လူကိုရှာမရဘဲ ၎င်း၏ ကင်မရာနှင့် ဦးထုပ်ကိုသာ ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ ကြောက်မက်ဖွက် သားရဲတိရစ္ဆာန် ကိုမိုဒိုနဂါး၏ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် လူနှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အေပီသတင်းဌာနနှင့် အခြားသတင်းဌာနတို့က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကိုမိုဒိုနဂါးများ၏ အစားအစာဖြစ်သော သမင်ကဲ့သို့သော သားကောင်များရှားပါးလာမှုကြောင့် ၎င်းတို့မှာ အစားအစာ ငတ်မွတ်နေသဖြင့် ဤသို့ရန်မူတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံတို့က ပြောကြားသည်။
ယခုအခါ သဘာဝတောထဲ၌ ကိုမိုဒိုနဂါးအကောင်ရေမှာ ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ထိသာရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ လူတို့၏ သစ်ခုတ်ခြင်းနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် သဘာဝတောထဲ၌ ကိုမိုဒိုနဂါးတို့ နေထိုင်ကျက်စားသော နေရာများမျာ လျော့နည်းကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများက ကိုမိုဒိုနဂါးကို မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်နိုင်သည့်ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော သတ္တဝါအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မျက်မှောက်ကာလတွင် အင်ဒိုနီးရှား အစိုးရက အမျိုးသားကိုမိုဒို ဥယျာဉ်ကြီးများ ဖွင့်လှစ်ထားသည့်အပြင် တရားဝင် ဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး ကိုမိုဒိုနဂါးများအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်လျှောက်ပေးလျက်ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "Dragon's Paradise Lost: Palaeobiogeography, Evolution and Extinction of the Largest-Ever Terrestrial Lizards (Varanidae)" (2009). PLOS ONE4(9): e7241. doi:10.1371/journal.pone.0007241. PMID 19789642. Bibcode: 2009PLoSO...4.7241H.
↑ "Varanus komodoensis" (2021). IUCN Red List of Threatened Species 2021. IUCN.
↑ Ouwens, P. A. (1912). "Onalarge Varanus species from the island of Komodo". Bulletin de l'Institut Botanique de Buitenzorg. 6: 1–3.
↑ ပိုင်စိုးဟန် သုတစွယ်စုံ၊ ဩဂုတ်၊ ၂၀၀၉
Wikispecies: Varanus komodoensis
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုမိုဒိုနဂါး&oldid=709125" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။